Andry Rabeza : « Mba hihambo sy hirehareha amin’ny maha Malagasy… » | NewsMada
Andry Rabeza : « Mba hihambo sy hirehareha amin’ny maha Malagasy… »
Tanora erotrerony, milomano anatin’ny mozika malagasy i Andry Rabeza. Nisongadina tanatin’ny fifaninanana « Kopi Kolé », avy eo tamin’ny « Feo tokana, gitara iray » izy. Manana vina sy tanjona hampiakatra avo ny maha Malagasy amin’ny alalan’ny kolontsaina sy ny zavakanto i Andry Rabeza. Resadresaka manokana.
Gazety Taratra (*) : Maro ireo efa mahafantatra kanefa mety misy koa ireo tsy mbola mahalala an’i Andry Rabeza. Azonao fintinina ve ny momba anao, ny fialamboly, ny tanjona, sns ?
Andry Rabeza (-) : Rabezandry Andriniaina Marcel ny anarako feno. Nosafidiko ho anarana entina miantsehatra ny hoe Andry Rabeza. 24 taona aho izao. Tia mozika, mazava loatra. Tia fanatanjahantena ihany koa aho: mpilomano, mpanao badminton, ping pong sy mpankafy mekanika. Mankafy ny nahandro malagasy ary efa mpanafana lanonana isan-karazany izao.
Nofinofiko hatramin’izay ny hoe hiadana sy ho finaritra ara-politika, ara-tsosialy ary ara-toekarena ny Malagasy. Mba tokony hihambo sy hirehareha amin’ny maha Malagasy azy koa ny Malagasy fa tsy ho sodokan’ny rivotra mitsoka avy any ivelany fotsiny. Tsy tokony hitsanga-menatra amin’ny fanindrahindrana ny kolontsaina, ary hataoko ho tanjona mihitsy izany.
* Mikasika izay indrindra, nanao ahoana ny lalana nolalovanao teo amin’ny tontolon’ny zavakanto?
Nisy maromaro ihany ny efa nodiavina teo amin’ny mozika, kanefa fianarana hatrany ny fiainana. Efa fiainako rahateo ny mozika, satria teo amin’ny faha-13 taonako aho no nanomboka nandalina izany. Nihaino, nianatra ary nitendry karazan-gadona maro aho, fa nanintona ahy manokana ny ba gasy.
Tsy niditra sekoly fampianarana mozika anefa aho, fa nampiana-tena teny, ankoatra ny fakana torohevitra amin’ireo zoky sy raiamandreny amin’ny mozika. Nanampy betsaka ahy tamin’izany ny maha skoto, izay nikarohako ny talentako. Mitendry zavamaneno maromaro ihany aho, fa ny gitara sy ny karazan’amponga fanao zavamaneno ravaka no tena manavanana ahy.
Efa mpitendry tany am-piangonana aho, avy eo nitohy teny ambony tamboho teny izany. Nanam-bintana kely taty aoriana, nahazo fampianarana sy fanoroana tamin-dry Kaolibera, Nini, Tselonina, tamin’ny fitendrena gitara. Nahazo fanampiana lehibe koa tamin’ireo “coachs” nandritra ireo fifaninanan-kira nandraisako anjara.
* Anisan’ny nahitan’ny maro anao voalohany ny fandraisana anjara tamin’ny lalao “Kopi Kolé”, izay nakanao tahaka an’i Eric Manana. Nanao ahoana ny niaina izany?
– Mazava loatra fa mpankafy an’i Eric Manana aho. Nandray anjara tamin’ny “Kopi Kole” andiany faha-4 tamin’ny taona 2016 aho, araka izany. Efa fantatro mialoha ny fahasarotan’ny fandikana ny tarehin’i Eric Manana, fa nanamarika ahy fotsiny ny tsy fampiasana “play back” fa nezahiko hatrany ny naneho ilay feon-gitara sy ilay goan-tenda. Nahafinaritra koa ny fifaneraserana tamina tanora samy tia mozika, avy amin’ny lafivalon’ny Nosy.
* Inona kosa no nanosika hanao tamin’ny “Feo tokana, gitara iray”?
– Mifanohy amin’izay ihany. Efa teo ny fitiavana ny sanganasan’i Eric Manana, kanefa izy no tena tompon’antoka voalohany tamin’ny fifaninanana. Niezaka nanaja sy nanaraka ny fepetra notakin’ny lalao aho. Satria efa tsy “Kopi Kole” intsony fa tena famoronana no natao, somary nanano sarotra ihany ny nanatanteraka azy. Hira iray no nangatahana tamin’ny mpifaninana tany am-boalohany, saingy nitombo arakaraka ny dingana niakarana izany. Nisy fotoana, tsy natory andro aman’alina satria tsy famoronana tononkira fotsiny fa miaraka amin’ny feony avy hatrany izany. Niezaka aho ny hamoaka izay talenta tao anatiko, ka mba tojo tamin’ny dingana famaranana ihany ary nahazo ny laharana fahatelo.
* Hanao ahoana ny tohiny?
– Dingana lehibe kanefa vao fanombohana ireny. Manam-pikasana ny hanao fandraketana am-peo sy an-tsary ireo hira vitako aho izao. Hiroso bebe kokoa anatin’ny sehatry ny famoronana ihany koa, na maro aza ny sedra mbola miandry. Hikajy hatrany ny fameloma-maso ny kolontsaina malagasy koa anefa…